प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार डा. कुन्दन अर्यालसँगको विशेष कुराकानी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार डा. कुन्दन अर्यालसँगको विशेष कुराकानी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार डा. कुन्दन अर्यालसँगको विशेष कुराकानी
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबारे विशेष खुलासा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ज नताको हितमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम छोडेर स–साना काममा अल्झिएको जस्तो देखिन थालेको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई नेता कार्यकर्ताको हित हुने गरी परिवर्तन गर्ने, विदेश भ्रमणमा जान लागेका उपकुलपतिलाई बन्दी बनाउने, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट कागजमा मात्रै हटाउने लगायतका गतिविधिले सरकार आलोचित भइरहेको छ । यता विकास र समृद्धिको सपना पनि बाँडिरहेको छ । यिन विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस संयोजक डा. कुन्दन अर्यालसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
डा. गोविन्द केसीप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओली कठोर बन्नुभएको हो ?
कठोर बन्नेभन्दा पनि सबै कुरा विधि ऐनअनुसार हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो । जिद्धीले मात्रै होइन, सुझबुझ र आवश्यकताअनुसार सरकारले काम गर्न खोजेको हो ।
केसीका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति त कठोर देखिएको छ नि ?
अनशन बसेर र दबाब दिएर मात्रै हुँदैन । संसदमा छलफल गरेर नियम बनाउने विषयलाई अनशन बसेर दबाब दिनु हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको आशय हो ।
म १४ वर्ष जेल बसेको मान्छे हुँ, कसैले थकाएर थर्किन्न भन्नुको अर्थ के हो ?
सरकारमाथि दबाब मात्रै दिएर गरिएको राजनीतिले राम्रो नतिजा दिदैन । यो कुरामा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि उहाँले आवश्यकताअनुसार छलफल गरिरहनुभएको छ । हिजो पनि चिकित्सकहरुसँग गोविन्द केसी र उनका मागका बारेमा छलफल भयो । समाधानको बाटो खोज्ने दिशामा प्रधानमन्त्री हिँडिरहनुभएको छ ।
समाधानको बाटो भनेको वार्ता र संवाद हो । तर यो तरिका अपनाउने संकेत पनि देखिएको छैन नि ?
कतिपय कुराहरु गोविन्द केसीले पनि छोड्नुपर्छ । सबै विषयमा छलफल हुनुपर्छ । बाहिरबाट दबाब दिएरै कानुन बनाउने भन्ने कुरा त ठिक होइन नि । यद्यपी वार्ता र संवाद चलिरहेको छ । केसीको स्वास्थ्य स्थिती नबिग्रियोस भन्ने नै छ । तर कसैले पनि जिद्धी गरेर मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्नु हुँदैन ।
माग सम्बोधनका लागि सरकार तयार नहुने, माग पूरा नभएसम्म गोविन्द केसी पछि नहट्ने । यस्तो जटिल अवस्था पार गर्न प्रधानमन्त्रीसँग के उपाय छ ?
समस्या समाधानका लागि कसैसँग पनि संजिवनी बुटी छैन । माथेमा आयोगअनुसार नै विधेयक बन्नुपर्छ भन्ने हो भने समाधान हुँदैन । समयअनुसार नियम बनाउने कुरामा सबै पक्ष सहमत भए मात्रै समास्या समाधान हुन्छ ।
तपाईहरुले माथेमा अयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई किन महत्व नदिनुभएको ?
आयोगको काम त प्रतिवेदन दिने मात्रै हो । प्रतिवेदनका आधारमा नियम बनाउने हो । आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै कानुनको रुपमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा उचित होइन ।
सरकार र गोविन्द केसीबीचको विवादको एउटा कारण काठमाण्डौ उपत्यकामा मेडिकल कलेज थप्ने कि नथप्ने भन्नेमा छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा मेडिकल कलेज थप्नै पर्ने अवस्था छ र ?
मेडिकल शिक्षा पढ्नका लागि वर्षेनी ५ सय नेपाली विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा मेडिकल कलेज धेरै भयो भने झैँ गरिएको छ । १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नै नपाइने भन्ने कुरा हुँदैन । यो कुरा त प्रवुद्ध व्यक्ति र चिकित्सकहरुले नै भनेका कुरा हुन् ।
संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाले अनुमति नलिइ विदेश जान खोजे, यो गल्ती नै हो, तर उनलाई जे व्यवहार गरियो त्यो ठिक हो ?
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अनावश्यक विषयलाई ठूलो इस्यु बनाइरहेको छ । सुरुदेखि नै अधिनायकवाद भनेर नारा बनाइएको छ । अधिनायकवाद पुष्टी गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले नाटक गरिरहेको छ । कुलप्रसाद सरको विषय ठूलो थिएन । उहाँले भ्रमण स्विकृत गराएर जानुपर्छ भन्ने त उहाँलाई थाहा थियो नि । उहाँलाई सरकारले तपाईको विदा स्विकृत भएको छैन भन्दा भन्दै पनि जान खोज्नुभएको थियो । त्यसैले रोकिएको हो । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीलाई पनि विदेश भ्रमण रोकिएको थियो ।
यस्ता स–साना कुरामा अल्झिने हो भने विकास र समृद्धिको सपना कसरी पूरा हुन्छ ?
स–साना कुरामा अल्झिदा विकास र समृद्धि प्रभावित हुन्छ कि भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ । तर नियम पालना गराउने र अराजकता रोक्ने काम नगर्ने हो भने पनि विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।
सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने प्रयास गरेर राम्रो सुरुवात गरेको थियो । तर अहिले त सेलायो नि ?
सरकारका उपलब्धिमध्ये यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय पनि महत्वपूर्ण छ । सबैले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । यो कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयन भएरै छाड्छ ।
२०७५ असार २५ गते प्रकाशित, l १०:२७